Shir uu Madaxweyne Farmaajo Iclaamiyay oo baaqday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shir uu Madaxweyne Farmaajo Iclaamiyay oo baaqday
Waxaa maanta lagu waday in uu Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ka furmo Shirka Golaha Amniga Qaranka Soomaaliya.
Shirka waxaa horey u iclaamiyay Madaxweynah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,waxaana lagu waday in uu maanta oo ay taariikhdu tahay 17-Bisha September uu u furmo Madaxda ugu sareeysa dowlada iyo Madaxda Maamul Goboleedyada dalka ka jira.
Madaxda Maamul Goboleedyada dalka oo dhawaan ku shiray Magaalada Kismaayo ayaa war-murtiyeed ay soo saareen ku sheegay in Muqdisho aysan shir uga qeyb geli Karin,isla markaana Dowlada dhexe ay xiriirka u jareen.
Dhinaca kale waxaa meeshii ugu xumeyd maraya Xiriirka wada shaqeyn ee ka dhaxeeyay Madaxa dowlada Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Maamul Goboleedyada dalka ka jira.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo Maanta Kulan Xasaasi ah leh